AnyDesk 3.6.3 License Key 2018 Full Crack maka PC & Mac [kacha ọhụrụ]
AnyDesk License Key software bụ ụwa kasị kasị pụrụ ịdabere na ime desktọọpụ ngwa n'ihi na ọrụ. Ọrụ nwere ike ịnweta ha niile mmemme, akwụkwọ, na faịlụ n'ebe ọ bụla, enweghị nwere na-enyefe ha data ka a ígwé ojii ọrụ. All mkpa ka ị na-eme ka malitere bụ ibudata AnyDesk License Key mac & pc na ẹkedori 1.1MB omume file. Ọ dịghị nwụnye ma ọ bụ (netwọk-) nhazi chọrọ. AnyDesk bụ a magburu onwe Remote Desktop ngwa na-eji a ọhụrụ video codec feature maka users.Moreover, ọ bụ vasatail, nọrọ ná nchebe na fechaa anaghị ichegbu na-arụ ọrụ nke ndị ọrụ PC. The software AnyDesk License Key eji TLS1.2 izo ya ezo, na ma nsọtụ nke njikọ na-cryptographically kwupụtara.
AnyDesk Mac bụ nnọọ fechaa software ọ dịghị ewe ukwuu ohere na abịakọrọ n'ime a 1MB file, na ọ dịghị nwụnye ma ọ bụ ndutịm ùgwù na-achọrọ. The UI nke AnyDesk bụ mfe na mfe navigate.With AnyDesk License Key ọrụ nwere ike iji ha kọmputa n'ebe ọ bụla. Ha ahaziri AnyDesk-ID bụ isi ihe ha na Desktọpụ, gị nile ngwa, akwụkwọ, na photos. Ọtụtụ ihe, onye ọrụ data mụ ebe ọ bụ na ha siri ike mbanye na ebe ọzọ.
AnyDesk 3.6.3 Ịgbawa plus Ikikere Key ọsọ na obere mode ndabara, ma ọrụ nwere ike wụnye ya dị ka usoro ihe omume ma ọ bụrụ na ha chọrọ to.During ifịk remote njikọ, ọtụtụ ntọala ndị ngwa ngwa si menu bar.AnyDesk ike ịgbanwe njikọ kee kasị mma video quality, speed, ma ọ bụ mee n'etiti abụọ. Ọzọkwa, ntọala ndị nwekwara customizable ka na-egosi na n'ime ime obodo cursor, mgbasa ụda, ịgbanyụ clipboard syncing, gwụ akara maka view-naanị, igbochi ndị ọzọ ọrụ input, na ewere a screenshot.Files nwekwara ike ga-agafere na AnyDesk site na-edegharị ha na clipboard na mgbe pasting ha na n'ime ime obodo na kọmputa.
AnyDesk na-arụ ọrụ na Linux, MacOS, Windows 10, Windows 8, Windows 7, na Windows XP-arụ ọrụ usoro.
AnyDesk License Key 2017 Crack Atụmatụ
Easy iji na a enyi na enyi ọrụ interface.
Connection mkpirisi nwere ike ịchekwa na Desktop maka ohere ngwangwa
N'oge a nnọkọ, njikwa nwere ike Switched n'etiti n'akụkụ.
Uzo mkpirisi nke keyboard nwere ike zigara a na n'ime ime obodo na kọmputa, ọbụna Ctrl-Alt-Del.
The ọrụ na akaụntụ image na Windows ga-egosipụta dị ka ha njirimara mgbe arịọ jikọọ ọzọ kọmputa.
A ndepụta gara aga njikọ ọnọde, tinyere ala nke AnyDesk mee ochie oghere njikọ mfe.
Ozi banyere n'ime obodo kọmputa nwere ike hụrụ na a usoro ọmụma tab.
Clipboard ọdịnaya nwere ike synced gafee usu na ahịa kọmputa.
Ọcha na n'Usoro interface na ndị nwere obere nhọrọ dị.
Obere download size (nanị ihe karịrị 1 MB) na-akwado faịlụ na-enyefe.
Nwere ike na-agba ọsọ na fullscreen mode na nwere Gụnyere ederede chat ike.
Akwado eziga keyboard Ụzọ mkpirisi.
Olee otú Crack AnyDesk Premium 3.6.3?
Download AnyDesk gbawara na 2017 License Key
Wụnye AnyDesk na adịghị na-emeghe ya.